Sangy Ratsin-dry zareo Rosiana Momba ny Sivana Anaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Alex Krylov
Voadika ny 10 Marsa 2019 4:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Deutsch, Italiano, Ελληνικά, Español, English
ireo bilaogera mpomba an'i Navalny “mandranitra” ireo mpifehy ny aterineto.
Toa noraiketin'ireo Rosiana mpikatroka amin'ny aterineto ho ao am-pon-dry zareo ilay fomba fiteny hoe “ny fiarovana tsara indrindra dia ny fanahìfihana”. Andro vitsivitsy taorian'ilay fibahanana [lahatsoratry ny Global Voices] tranonkala marobe an'ny mpanohitra, nataon'ny Roskomnadzor, masoivoho mpandrindra ny fifandraisandavitra ao Rosia, nanangana rafitra saro-takarina hahafahany miala sy mamaly bontana ny sivana ireo mpandàla ny fahalalahana miteny ao an-toerana. Mety tsy hampahazo aina ireo mpanivana sy ireo tranonkala mpomba an'i Kremlin ilay rafitra.
Tany am-boalohany ilay rafitra dia sosokevitra [rosiana] avy amin'i alexkbs, mampiasa ny Habrahabr, vavahadin-tserasera fanoratana rindrankajy. Taty aoriana kely, dia nampiharin'ilay bilaogera Ruslan Leviev, ho toy ny fomba iray fanaon'ireo mpampiasa tsotra mba hidirana amin'ny bilaogin'i Alexeï Navalny, mpitarika ny fanoherana ao Rosia , natsofoky ny Roskomnadzor ho ao anatin'ny « lisitra mainty » ary nobahanan'ireo mpanome tolotra aterineto tao Rosia. Mety tsy ho ananan'ireo mpampiasa tsotra ny fahaizana teknolojika hampiasàna ireo tolotra manokana toy ny Tor, i2p, VPN sy ireo lohamikina Proxy [rosiana], hoy i alexkbs, mba hahafahany mandingana ny fandraràna tsy hiditra amin'ny tranonkalan'i Navalny. Izany no antony nifantohan'ny fomba firosony ho any amin'izay hahafahan'ireo mpampiasa hiditra amin'ireo tranonkala nobahanana, amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo tambajotran-tranonkala tsotra ihany.
Ilay rafitra dia fitambarana “tambajotra fitaratra”, na dika mitovy tanteraka amin'ny bilaogin'i Navalny (na izay tranonkala hafa voakasika), nafangaro taminà rafitra iray feno fahaizamamorona amin'ny resaka fiarovana mavitrika. Satria takian'ny Roskomnadzor amin'ireo mpanome tolotra ny hanamarinan-dry zareo tsy tapaka raha toa ny fitaovana iray ka miezaka handingana ilay fandraràna amin'ny fanovàna ny adiresy IP, ireo fitaovana voabahana dia afaka mampiditra soramiafina iray izay mamily ny sasantsasany amin'ireny fangatahana IP ireny ho any amin'ny tranonkala iray hafa. Farany, araka ny teoria, hanenjika ilay familiana sy hanakana ilay tranonkala faharoa ihany koa ireo mpanome tolotra.
Nandalo sedra ity hevitra ity tamin'ny 17 Martsa 2014, rehefa injay ilay tranonkala malaza sy mbomba ny governemanta, LifeNews, nobahanan'ny maro tamin'ireo mpanome tolotra aterineto [rosiana] noho io fikafika familiana io. Iray tamin'ireo tranonkala fitaratra avy amin'ny bilaogin'i Navalny no tomponantoka nahatonga io fibahanana io. Taty aoriana, nanao fampakarana tany amin'ny Roskomnadzor ny LifeNews, ary vokatr'izay dia novahàna ilay tranonkala fitaratra, izay manaporofo fa nahomby ilay ezaka hanatsimbadihana an-kery ny sivana. Nibitsika ny vaovao momba ny fahombiazana azony i Leviev, tamin'ny famoahana pikantsary avy amin'ilay tranonkala fitaratra notsoahana tao anaty lisitry ny Roskomnadzor :
Учитесь как надо на**ывать систему 😉 pic.twitter.com/YRg523fKS2
Ianaro ny mampihinan'…..ny rafitra 😉
- Ruslan Leviev (@RuslanLeviev) 18 martsa 2014
Mazava loatra, toy ny fitaovampiadiana rehetra, dia sady azo ampiasaina ho amin'ny tsara, no azo anaovana ratsy ihany koa ny familiana toy itony- ara-bakiteny dia afaka bahanana toy ity nitranga ity daholo ny tranonkala rehetra, tafiditra anatin'izany, ohatra, ny tranonkalan'ny mpifaninana ara-pandraharahàna amin'ny tena. Azon'ny Roskomnadzor atao ihany koa ny miady amin'io fahombiazana io amin'ny famoronana « lisitra fotsy, » izany hoe tranonkala tsy natao hobahanana mihitsy, na inona na inona antony.
Nisy fomba iray hafa natolotr'i @unkn0wnerror, mpampiasa Twitter mba « hamitahana » ilay rafitra, izay manosoka hevitra hampidirana ny Roskomnadzor izy tenany ho ao anaty lisitra mainty. Raha io tranga io no raisina, raha vao miezaka ny hijery ireo tranonkala fitaratra avy amin'ny tranonkalan'i Navalny ry zareo mpandrindra, ny hany hitany dia sary saka kely iray mameno ny fàfana :
Navalny.us araka ny nahitan'ireo mpandrindra avy amin'ny Roskomnadzor azy.
Ry Leviev sy ny namany dia manohy mieritreritra fomba maro vaovao ho fandinganana ny sivana ety anaty aterineto, ohatra, tamin'ny 24 Martsa 2014, nanambara i Leviev [rosiana] tao amin'ny bilaoginy fa nahaforona ‘extension Google Chrome’ izy sy ny tariny mba hanaovana mandeha ho azy ny zotra fidirana mankany amin'ireo tranonkala fitaratry ny bilaogin'i Navalny. Mety ho azo kianina ny zotom-po atonton'i Leviev mba hialàna amin'ny fanivànana ny bilaogin'i Navalny manokana. Izany eo ihany, fa ireo lahatsoratr'i Navalny dia avoaka ihany koa ao amin'ny kaontiny Facebook, izay afaka idirana mora foana ao Rosia. Vahaolana iray faran'izay tsotra, naroson'i [rosiana] Anton Nosik, ny hamakiana tsy ankifidy ireo tranonkala voabahana, amin'ny fampiasana fahana RSS iray. Ny fanazavana iray dia hoe io tetikasa io dia fanamafisana fotokevitra – fomba iray fiomanana amin'izay hoavy mety hanjombona rehefa ho tandindonin-dozan'ny fanankendàna ireo feo rehetra manohitra ety anaty RuNet.